KAIST - दक्षिण कोरिया को शीर्ष विश्वविद्यालय मा उच्च शिक्षा
शहर : डाएजीओन
गरयो : KAIST
विद्यार्थी (लगभग।) : 11000
नबिर्सिनुहोला KAIST छलफल
KAIST मा भर्ना
आदरणीय मेहमान, अध्यक्ष Myung ओह; न्यासी गिल-Saeng चुंग र शमू-सु डु Pyo; पूर्व राष्ट्रपति चाँडै-दल चोई र चांग-रवि हङकङ; राष्ट्रिय सभा को पूर्व सदस्य, Mr. येओंग-Kyung ली; अध्यक्ष अणु ऊर्जा विभाग-Im एस को पूर्वसूचना को संघ को कांग&टी संगठन र यसको सदस्य राष्ट्रपति – राष्ट्रपति युवा-Myung आणविक Nonproliferation र नियन्त्रण को कोरिया संस्थान को चोई, राष्ट्रपति युवा-Joon विज्ञान र प्रविधि को ग्वान्झाउ संस्थान को किम; र सुश्री. सु डु-साना ली, KAIST विकास फाउंडेशन को अध्यक्ष, जसले श्री सँगसँगै KAIST लागि काम मा उनको ऊर्जा अतिरिक्त छैन. Eung-रवि ली, फाउन्डेसनले को उपाध्यक्ष कुर्सी, उपाध्यक्ष त्यहीँ-कू KAIST स्कूल संघ समर्थन चुंग, राष्ट्रपति KWI-Roh राष्ट्रिय नैनो निर्माण केन्द्र ली, राष्ट्रपति डू-Chul विकसित विज्ञान कोरिया संस्थान को किम, प्रोफेसर Jang-Hyuk Kwon, कोरिया विज्ञान प्रतिष्ठानमा को प्रमुख, विशिष्ट संकाय र कर्मचारी, को वर्ग 2017, फर्केपछि विद्यार्थी, छात्र, आमाबाबुले, मेरो नातेदार र साथीहरू, र अन्ततः मेरो पत्नी Myoung एक (मेरो) कांग, म सबै भन्दा इमानदारीसाथ 15 औं KAIST राष्ट्रपतिको पद को शुरुवात लागि यहाँ भइरहेको लागि धन्यवाद.
मलाई आज यहाँ खडा गर्न विशिष्ट अर्थपूर्ण छ र विगत देखि धेरै सम्झना ल्याउँछ. ठ्याक्कै पचास वर्ष पहिले, को जनवरी मा 1963, म 111th वर्ग को एक नयाँ enlistee रूपमा सैन्य प्रशिक्षण थियो (111 मानिसहरू) Yuseong मा कोरियाली वायु सेना यहाँ को. म आधारभूत सैन्य तालिम दुई महिना त्यहाँ बिताए, र9विद्युतीय संचार उपकरण सेवामा प्राविधिक तालिम महिना. जनवरी को महिना अचाक्ली एक तापमान संग चिसो थियो -20 डिग्री सेल्सियस - यो इनचान बे स्थिर थियो वास्तवमा यति चिसो थियो. नोभेम्बर मा म त Kangneung मा वायु सेना आधार हस्तान्तरण गरिएको थियो, Kangwon-के. म सम्झन कि म Kangneung गर्न हवाइजहाज लागि Osan मा प्रतीक्षा थियो, म दुःखी समाचार सुनेको राष्ट्रपति यूहन्ना फा. केनेडी डलास मा मृत्यु गोली थियो, टेक्सास, जो एकदम कठोर थियो.
मा 2002, म KAIST एक गएर प्रोफेसर थियो र गर्मी समयमा म शक्तिशाली इटालियन टोली लाग्नेछन् गर्न पछि देखि आउछन् कोरियाली राष्ट्रिय फुटबल टोली हेर्दै को खुशी थियो 2:1. आज सम्म, म कोरियाली टोली द्वारा गोल गरेका थिए ती दुई नाटकीय लक्ष्य सम्झना जीवन्त, र राष्ट्रिय घमण्ड र आशावाद को अर्थमा.
आज, म नयाँ KAIST अध्यक्ष रूपमा सेवा गर्न Yuseong फर्कन. यो ठूलो सम्मान हो, तर राष्ट्रिय महत्व मा पूरा गर्न कार्य र थुप्रै तरिकामा चुनौतीपूर्ण छ.
KAIST मा स्थापित भएको थियो 1971 यसको संस्थापक लक्ष्य संग, को KAIST संविधान लेखमा यसो रूपमा 1, पहिलो, शिक्षित र पालुङ्गो शीर्ष उडान भविष्य वैज्ञानिकहरूले व्यावहारिक आवेदन कठोर आधारभूत सिद्धान्त र क्षमता सुसज्जित; दोस्रो, बाहिर आधारभूत दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै पूरा र राष्ट्रको रणनीतिक प्राविधिक प्रगति सक्षम बनाउँछ अनुसन्धान लागू गर्न; र तेस्रो, अनुसन्धान संस्थाहरू र उद्योग को एक विविध पूल संग अनुसन्धान सहयोग प्रदान गर्न
यस्तो ब्यानर अन्तर्गत KAIST गत लागि कोरिया मा विज्ञान र प्रविधिको उद्योग को वृद्धि नेतृत्व छ 40 आफ्नो स्थापना पछि देखि वर्ष र, एक विश्वव्यापी मान्यता विशिष्ट अनुसन्धान विश्वविद्यालय भएको छ, यो उल्लेखनीय संकाय र कर्मचारीलाई धन्यवाद उत्कृष्ट अनुसन्धान र हाम्रो भविष्य नेताहरूको शिक्षा समर्पित. गहिरो कृतज्ञता कारण मेरो predecessors पनि छ, डा. भियतनाम Pyo Suh र अन्य पूर्व राष्ट्रपति र आफ्नो प्रशासनिक टोली सदस्य, जसले तिनीहरूलाई सँगसँगै काम गरेको छ.
आज, धेरै KAIST स्नातकहरूको उच्च शिक्षामा प्रतिष्ठित प्राध्यापकहरू रूपमा उल्लेखनीय योगदान बनाउने र विज्ञान र ईन्जिनियरिङ् क्षेत्रहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले अग्रगामीहरूसित.
बस एक हप्ता पहिले, मेरी श्रीमती र म अन्तर्राष्ट्रिय ठोस-राज्य सर्किट सम्मेलन मा एक KAIST छात्र स्वागत गर्न बोलाइयो (ISSCC) सैन मा, जो धेरै KAIST छात्र उपस्थित थियो, वर्तमान विद्यार्थी र आफ्नो प्राध्यापकहरू, र अतिथि. म यस वर्ष एक पटक फेरि सिकेका, जहाँ स्वीकृति को मानक पट्टी एकदम उच्च छ KAIST ISSCC मा सबैभन्दा कागजात प्रस्तुत. यो KAIST पुग्न कसरी छ नयाँ हाइट्स को एक थप सङ्केत छ. यो KAIST संकाय र विद्यार्थीहरू यस्तो प्रकृति र विज्ञान रूपमा विभिन्न विश्वव्यापी-सम्मान पत्रिकाहरूमा थुप्रै कागजात प्रकाशित छन्.
KAIST माथि र यी प्रारम्भिक उपलब्धिहरूलाई बाहिर जाओ जारी गर्नुपर्छ, र KAIST कोरिया को आर्थिक र औद्योगिक प्रगति को लागि एक शक्तिशाली इन्जिन हुनुपर्छ. राष्ट्रले प्राकृतिक स्रोतहरूको गहिरो पूल कमी, कोरिया आफ्नो मान्छे को समृद्धि र राम्रो-अस्तित्व सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न अभिनव तरिका फेला पर्छ. KAIST चाव र जिम्मेवारी विज्ञान र प्रविधिको को frontiers तिर राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गर्नुपर्छ.
आउँदै दिन, KAIST अनुसन्धान र शिक्षा को क्षेत्र मा एक ठूलो फल रूख मा बढ्न गर्नुपर्छ, विश्वसनीय र मात्र होइन कोरिया सम्मान, तर संसारभरि. कोरियाई प्रायद्वीप देखि शुरू, यसको जरा राष्ट्रिय सीमा परे span गर्नुपर्छ, यसको फल उत्पादन गर्न विश्व-वर्ग विचार र नवाचारै को एक धनी र विविध सेटमा आकर्षित गर्न धेरै महादेशमा गर्न पाँच समुद्रहरू भन्दा पार - समाजलाई नेता र योगदान सम्मान गरिनेछ जो राम्ररी तयार स्नातकहरूको.
एक विश्वव्यापी-जोडिएको शिक्षा उन्नत इन्टरनेट सक्षम वृद्धि व्यापार को यो उमेर मा आवश्यक छ, सुपरसोनिक उड्डयन, र supersize जहाज. KAIST स्नातकहरूको गहन ज्ञान संग नवीन आविष्कारहरु रूपमा कदर हुनुपर्छ, रचनात्मकता, बलियो टिमवर्क र स्पष्ट संचार भाषामा fluency संग को लागि क्षमता. र जहाँ तिनीहरूले जाने, तिनीहरूले नैतिकता फैलाउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ, मान, कौशल र ज्ञान, र हामी सबै KAIST रूखहरू रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ देखि विश्वव्यापी फूल.
विज्ञान परम लक्ष्य, प्रविधि र व्यवस्थापन हाम्रो समाज को राम्रो-अस्तित्व मा निहित. र यो राम्रो-अस्तित्व सिक्ने घरहरू रूपमा विश्वविद्यालय मा सुरक्षित हुनुपर्छ, छिमेकी क्षेत्रहरु, राष्ट्रलाई र संसारलाई.
समाज को यो राम्रो-अस्तित्व सुरक्षित गर्न यसको प्रयासमा, KAIST यसको उल्लेखनीय वृद्धि amidst बढ्दै पीडा भोगे छ. हामी आपसमा भरोसा र विचार मार्फत दुखाइ सुख ​​पर्छ, र KAIST को brighter भोलि तिर कदम एकता मा सामेल. म नम्र भएर आफ्नो मदत, र एक सेवक नेता रूपमा मेरो यथासक्य प्रयास गर्न कसम.
के तपाईं "मिशन" नामक सिनेमाको थाहा हुन सक्छ. यो फिल्म, रबर्ट डी Niro द्वारा प्ले भृतक र दास व्यापारी नम्र जेसुइट पुजारी पालना र आफ्नो जीवन फेरि नयाँ सुरु गर्न विचलित जीवन देखि मा उत्प्रेरित गर्छ. एक दृश्य मा, डी Niro र पुजारी एक ठाडो झरना cliff अप चढाई छन्. जब तिनीहरूले सबै भन्दा कठिन आरोहण पूरा, आफ्नो पापको Penance रूपमा सामान को एक धेरै भारी लोड उसलाई पूरा, तिनीहरूले मूल भारतीय को एक समूह द्वारा अभिवादन थिए, जसले सामान नष्ट र cliff भन्दा यो ड्रप. डी Niro आफ्नो एक पटक मूल्यवान वस्तुहरू गुमाएको संग गर्दा सजिलो बस्न भएन, यो बोझ सबैलाई देखि फुकुवा गरियो, र आफ्नो जीवन अगाडि जारी.
नयाँ अध्याय खोल्न, KAIST यस्तो साहस पार्छन् पर्छ. बरु बहस र विगतका wrongs लागि मान्छे blaming को, KAIST सामूहिक यसको भविष्य ध्यान केन्द्रित र अगाडी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पूरा गर्न आफ्नो यथासक्य गर्नुपर्छ. र हामी हाम्रो समझ देखि हाम्रो यात्रा र हाम्रो मिशन murky र अनावश्यक कठिन हुनेछ कि ती कुराहरू जारी गर्न प्रत्येक अन्य मदत गर्नुपर्छ. मेरी पत्नी र मैले हाम्रो आमा राष्ट्रको खातिर KAIST उत्थान लागि काम गर्न यहाँ.
देर आध्यात्मिक नेता महात्मा गान्धी ठूलो सात पाप विरुद्ध चेतावनी दिए. तिनीहरूलाई सबैभन्दा KAIST सान्दर्भिक 'हो अन्तस्करण बिना विज्ञान,'चरित्र बिना ज्ञान','सिद्धान्त बिना राजनीति','र' धर्म बलिदान बिना। 'हामी विज्ञान बढाउन प्रयास गर्नुपर्छ, ज्ञान, र स्पष्ट अन्तस्करण वर्ण, uncompromising सिद्धान्तहरू र इच्छुक बलिदान.
KAIST, एक नेता बन्न र विज्ञान योगदान गर्न, प्रविधि र औद्योगिक विकास, निम्न पाँच क्षेत्रमा राम्रो गर्नै पर्छ - प्रत्येक हाम्रो संस्थाले नाम मा पाँच अक्षर प्रयोग जोड.
पहिले, "K" ज्ञान सिर्जना लागि हो. संकाय सदस्यहरु र विद्यार्थीहरू नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्न अग्रगामी अनुसन्धान मा उद्यम हुनेछ. KAIST Daedeok औद्योगिक पार्क र अन्य ठाउँमा घरेलू उल्लेखनीय अनुसन्धान केन्द्र संग सहकार्य हुनेछ, र अन्तर्राष्ट्रीय अरूलाई विश्वव्यापी सिलिकन उपत्यकाका समेत साथ. उच्च मूल्य ज्ञान सिर्जना अक्सर विश्व-वर्ग सुविधा र एक पर्यावरण आवश्यक. हामी सक्रिय समर्थन र सरकारबाट संलग्नता र अन्य प्रमुख संगठन बढाउन हाम्रो सबै भन्दा राम्रो के हुनेछ.
व्याख्यान हल र प्राध्यापकहरू 'अनुसन्धान प्रयोगशालाओं नयाँ ज्ञान सृष्टिको वेल्स छन्. विद्यार्थी-केन्द्रित र संकाय-नेतृत्व अनुसन्धान कार्यक्रम मा, हार्ड उत्प्रेरित- काम विद्यार्थीहरूले, स्नातक र स्नातक दुवै, निकै विविध र अद्वितीय अवसर लाभ उठाउन सक्छौं. तथापि, सबै फलदायी अनुसन्धानकर्ताहरूले सीधा एक विद्यार्थी छन्. म क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय को मा उल्लेखनीय शोधकर्ता सम्झना, बर्कले जब म एक स्नातक छात्र थियो. उहाँलाई अनुसन्धान सर्व थियो, र त्यो प्रयोगशाला सञ्चालन प्रयोगहरू दिनहरुमा र रात बिताए. उहाँले अझै पनि मध्यरातमा विगतमा आफ्नो पीठ मा हुनेछ, भने पनि परीक्षा अर्को बिहान दिइने थियो. उहाँले सबै रूपमा प्राप्त गरे, तर ज्ञान सृष्टिमा, उहाँले कुनै पनि दोस्रो थियो. चाँडै स्नातक पछि उहाँले धेरै अनुसन्धान breakthroughs विश्व विस्मित गर्न थाले. KAIST मोल र यस्तो प्रतिभा समर्थन गर्नुपर्छ, अन्यथा यो राष्ट्रिय एक हानि छ.
जहाँ धेरै रत्न पाउन सकिन्छ अंतःविषय अनुसन्धान untraveled इलाकाको अन्वेषण प्रोत्साहित गर्नेछ. एक अनुसन्धान विश्वविद्यालय मा, व्यक्तिगत शैक्षिक विभाग उत्कृष्टता को केन्द्र हुनुपर्छ. यो एउटा सिद्ध क्षेत्र वा एक बल तुलना गर्न सकिन्छ. तथापि, KAIST को ज्ञान ठाउँ क्षेत्रहरू भरिएको छ भने मात्र, त्यसपछि 48% सम्पूर्ण स्पेस unfilled रहने थियो, जो अनुसन्धान संसारलाई हल्लाउने लागि अन्वेषण गर्न स्पेस छ.
अंतःविषय अनुसन्धान विभिन्न शैक्षिक विभाग देखि संकाय सदस्यहरूको लागि राम्ररी पर्खाल तोडेर र विजयी असुविधाहरु द्वारा सहयोग गर्न भनिएको छ. बेल ल्याब को प्रवेश हल कुँदिएका, मुरे हिल, नयाँ जर्सी नयाँ कुरा पत्ता लगाउन unexplored क्षेत्रहरूमा भ्रमण गर्न सोध्छन् जो अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल शिक्षाले छ.
KAIST विश्वास र उत्साह यस्तो KAIST संस्थान रूपमा स्थापना र अन्यको अंतःविषय अनुसन्धान कार्यक्रम मा भाग लिन निरन्तर प्रवर्द्धन गर्न र समर्थन अनुसन्धानकर्ताहरूले आवश्यक.
दोश्रो, "एक" सबै मोर्चों मा प्रगति को लागि छ. जनवरी मा 30, नारा-Ho सफलतापूर्वक भेला र संसारभरि सबै मानिसहरूलाई लाभ उठाउन भनेर सूचना गर्न विश्व सर्कलमा शुरू भएको थियो. र नारा-Ho जस्तै, KAIST हाम्रो संसारलाई राम्रो ठाउँ बनाउन एक उच्च ऊंचाई नै सुरु गर्नुपर्छ.
एक विश्वव्यापी प्रमुख संस्थान बन्न, KAIST दुवै नैतिक र आर्थिक आवश्यक समर्थन सुरक्षित गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गर्नुपर्छ. KAIST हरेक सदस्य सबै कुराहरू राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा unshakable विश्वास हुनुपर्छ, कि अभिनव तरिका पाउन सकिन्छ र कुराहरू सुधार्न सक्ने. असल बानी निर्माण र unceasingly अभ्यास गर्नुपर्छ. KAIST पनि यसको समग्र दक्षता सुधार गर्ने पाउनुहुनेछ.
KAIST को Daedeok औद्योगिक पार्क मा मूल विज्ञान लागि संस्थान र धेरै अनुसन्धान केन्द्र संग सहयोग बलियो बनाउन तरिका फेला पर्छ. यो राम्रो सिलिकन भ्याली सफल यस्तो स्टैनफोर्ड रूपमा छिमेकी विश्वविद्यालय को अनुसन्धान र शिक्षा मा hinged छ जानिन्छ, बर्कले, र सान जोस राज्य. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को डीन फ्रेडरिक Terman प्रोत्साहन र हेवलेट-पैकार्ड कम्पनी सिर्जना गर्न विलियम हेवलेट र दाऊदले पैकार्ड मदत.
KAIST भविष्य खाका यसको सबै constituents र न्यासी को बोर्ड संग परामर्श मा remade गर्न आवश्यक. एक खाका यस्तो सह-स्वामित्व कदर गर्न सकिन्छ, सम्हाल्नुभएको र सबै को पूर्ण सहभागिता संग बुझे.
तेस्रो, "म" निष्ठा लागि खडा छ. KAIST को निष्ठा सिद्धान्त र अभ्यास बीच एक लगातार राम्रो सन्तुलन सुनिश्चित गर्नेछ, स्वतन्त्रता र सिद्धान्त, इमानदारी र सामुहिक, र मूल्य र कार्य. निष्ठा कदर र अभ्यास हुनुपर्छ सबै अनुसन्धान प्रकाशनहरूमा, वित्तीय व्यवस्थापन, र मानव सम्बन्ध.
धेरै वर्ष पहिले म Kos द्वीप मा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उपस्थित, ग्रीस. यो यात्राको समयमा म एक पौराणिक कथा मार्फत निष्ठा को सार बारेमा थप सिकेका. कथा अनुसार, एक मूर्तिकार एक प्रिय नायक सम्झना गर्न एक बस्ट उत्पादन गर्न अह्राउनुभयो थियो. तर यो पनि लामो लिइरहेको थियो र परियोजना को आरोप मा व्यक्ति मूर्ति भ्रमण र उत्पादन तुरुन्तै वितरण गर्न सकिएन किन प्रश्न. उहाँलाई यो गरिन देखा पर्नुभयो, तर मूर्तिकार पीठ पूरा गर्न उसले धेरै समय आवश्यक भन्नुभयो. निराशाले मा सोधेका आगन्तुक पीठ हेर्न हेरचाह थियो. मूर्ति जवाफ थियो, "मेरो revered भगवान पीठ देख्नुहुन्छ।"
मलाई विश्वास छ एक व्यक्ति वा निष्ठा संग एक संगठन सहन र समय को परीक्षण खडा गर्न सक्नुहुन्छ. निष्ठा KAIST को एक सद्गुण हुनुपर्छ.
Fourthly, "एस" स्थिरता लागि हो. शिक्षा र अनुसन्धान KAIST मा अंततः दिगो सत्य खोजी गर्नुपर्छ. अनुसन्धान विषयवस्तुहरू आफूलाई दिगो हुनुपर्छ र अचाक्ली अल्पकालीन लक्ष्य द्वारा संचालित छैन. यो EEWS कार्यक्रम ऊर्जा मा प्रमुख वैश्विक मुद्दाहरू सम्बोधन, पर्यावरण, पानी र स्थिरता. स्थिरता सञ्चालित अनुसन्धान र विकास को सफलता संग, KAIST मा विज्ञान र प्रविधिको एक शीर्ष echelon वैश्विक नेता हुन उठ्नेछ. स्थिरता सञ्चालित अनुसन्धान धेरै प्रोत्साहन र समर्थन अन्तर्गत ब्लूम हुनेछ. अक्सर अनुसन्धान परिणाम एक दृष्टान्त सूचकांक मापन छन्, तर कुनै कम महत्त्वपूर्ण आफ्नै विश्वास र भरोसा द्वारा आश्वासन गुणस्तर छ.
म डा एउटा उदाहरण उद्धरण द्वारा यस कुरा मा विस्तृत सक्नुहुन्छ. क्लाउडडुमासद्वारा शान्नोन AT मा अनुसन्धान गरे जो&टी बेल ल्याब र पछि एमआईटी मा एक प्रोफेसर भए. उहाँले परेको खण्डमा प्रकाशित तर आफ्नो प्रकाशनहरू प्रत्येक एक jewel थियो. आज सम्म, आफ्नो जानकारी सिद्धान्त मोटे लागू. हामी त्यही कैलिबर धेरै दिगो योगदान गर्न KAIST समर्थन गर्न आवश्यक.
Fifthly, "टी" ट्रस्ट लागि हो. KAIST सरकार द्वारा विश्वसनीय छ, जो एक संस्थाले हुनुपर्छ, आफ्नो मान्छे, र विद्यार्थीहरूको आमाबाबुले. भरोसा कडा नगद बहुमूल्य रूपमा ठानेको छ.
विश्वास को संस्कृति समझ मार्फत सम्भव र एकअर्काको परिस्थितिमा एक हेरचाह छ. भरोसा KAIST संस्कृति को एक भागको रूपमा परिसर मा स्थायी जरा हुनेछ जब संकाय, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू, KAIST समुदाय को सबै सदस्यहरु, सुन्न र धेरै फरक विचार र विचार अरूलाई पकड बुझ्न र एक अर्को लागि प्रत्येक अन्य गरेको कामबारे र निष्कपट बधाई साझेदारी. यसबाहेक, हामी विज्ञान र प्रविधिको गर्व साथ राष्ट्रिय र सामाजिक प्रयास र जिम्मेवार अर्थमा हाम्रो आफ्नै भागहरु गर्न आफूलाई समर्पण गर्दा, यसलाई पुनः प्राप्त र भरोसा राष्ट्रलाई र सार्वजनिक बलियो हुनेछ, साथै वैश्विक समाज रूपमा, KAIST लागि पकड. एक बडा मात्रा मा, हामी पनि गर्न एक विश्वसनीय संस्था पछि धेरै प्राध्यापकहरू र विदेश विद्यार्थी द्वारा खोजे गर्न आवश्यक. स्थापित यस्तो विश्वास संग, KAIST स्नातक र कोरिया को मान्छे बढी र ठूलो अवसर विश्वव्यापी पाउन सक्छन्.
सारांशमा गर्न, KAIST ज्ञान सृष्टिको दृश्यमा उल्लेखनीय हुनुपर्छ, गतिशील प्रगति, निष्ठा, स्थिरता र भरोसा.
KAIST कोरिया को मान्छे को तनमनको समर्थन मार्फत एक विश्वव्यापी मान्यता विश्वविद्यालय रूपमा आफ्नो ठाउँमा पुगेको छ. म KAIST Hauling लगातार परिवर्तन र नवीनता मार्फत समाज द्वारा aspired दुनिया-प्रमुख विश्वविद्यालय को मोर्चा बाँध्न सामेल भनेर बुझ्न राष्ट्रको प्रेम र समर्थन फिर्ता मात्र तरिका हो, जो धेरै म KAIST राष्ट्रपतिको पद मा उद्घाटन छु रूपमा म लिन आह्वान थियो मिशन छ.
सम्मान अतिथि, परिवार र साथीहरू, म माथि गोलो अघि मेरो बोली एउटा थप बरु महत्त्वपूर्ण वस्तु मा टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ.
अन्तिम, तर कम से कम, म को क्लास बधाई गर्न चाहनुहुन्छ 2017 आफ्नो उपलब्धिहरू लागि. तपाईं KAIST आउन भयंकर प्रतियोगिता overcame, र तपाईं यस बिन्दु पुग्न कठोर चुनौतीहरूको मार्फत persevered छन्. तपाईं यहाँ भर्ना गर्न आफ्नो निर्णय गर्नुअघि agonized हुन सक्छ तापनि, तपाईं बुद्धिमानीपूर्वक रोजेको. को KAIST परिवारको सबै सदस्य तपाईं यी पर्खालहरु परे सार्न रूपमा आफ्नो भविष्य सफलता सुनिश्चित गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो के हुनेछ. तपाईं भ्रमण गर्न को लागि मेरो ढोका सधैं व्यापक खुला, र म स्वागत सधैं र आफ्नो प्रश्न मोल, अवलोकन र सुझावहरू.
यो सामान्य मा शिक्षा र निर्देशन गर्न आउँछ कुखुरा, कृपया KAIST प्राध्यापकहरू र समर्थन कर्मचारी विद्यार्थीहरूको लागि र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शिक्षाको लागि यहाँ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन.
को क्लास 2017, KAIST र बाहिर आफ्नो सफलता को एक चुम्बक एक विज्ञान र ईन्जिनियरिङ् शिक्षाको लागि थप प्रतिभाशाली उच्च विद्यालय विद्यार्थी आकर्षित गर्न हुन सक्छ. KAIST प्राध्यापकहरू आफ्नो भूमिका मोडेल हो र आफ्नो जीवन-लामो mentors र कोच हुन सक्छ.
व्यक्तिगत, भन्दा बढी पछि पनि 40 बर्कले मेरो स्नातक देखि वर्ष, मेरी श्रीमती र म जाने बर्कले मेरो शिक्षकहरू भ्रमण, प्रोफेसर लियोन Chua र अर्नेस्ट Kuh, भोजन सँगै आनन्द र जीवनको धेरै पक्षहरू मा घनिष्ठ कुराकानी गर्न. बस यो महिना, तिनीहरूले KAIST राष्ट्रपति रूपमा मेरो उद्घाटन को सुन्न खुसी थिए र सबै भन्दा राम्रो KAIST मेरो नयाँ भूमिका लागि इच्छा दिनुभयो.
प्रिय आदरणीय अतिथि, म KAIST यो नयाँ अध्याय को शुरुवात चिनो आज यहाँ भइरहेको लागि धन्यवाद. म ईमानदारी विश्वास र आफ्नो समर्थन KAIST अघि बढाउन जारी र हामी सबै लाभ हुनेछ भनेर सोध्न, हाम्रो राष्ट्र, र दुनिया.
प्राकृतिक विज्ञान को कलेज
गणितीय विज्ञान विभाग
Nanoscience को स्नातक स्कूल & प्रविधि
जीवन विज्ञान को कलेज & बायो-इन्जिनियरिङ
जैविक विज्ञान विभाग
चिकित्सा विज्ञान र इन्जिनियरिङ विभाग
यांत्रिक को स्कूल, एयरोस्पेस र सिस्टम इन्जिनियरिङ
महासागर सिस्टम इन्जिनियरिङ को स्नातक स्कूल
विद्युत ईन्जिनियरिङ् स्कूल
गणनामा को स्कूल
वेब विज्ञान र प्रविधि को स्नातक स्कूल
सूचना सुरक्षा को स्नातक स्कूल
नागरिक विभाग & वातावरणीय इन्जिनियरिङ
जैव विभाग & मस्तिष्क ईन्जिनियरिङ्
औद्योगिक डिजाइन विभाग
औद्योगिक र सिस्टम इन्जिनियरिङ विभाग
रासायनिक र Biomolecular इन्जिनियरिङ विभाग
सामाग्री विज्ञान र ईन्जिनियरिङ् विभाग
आणविक र क्वान्टम इन्जिनियरिङ विभाग
सूचना र संचार इन्जिनियरिङ विभाग
ग्रीन परिवहन लागि Cho चुन Shik स्नातक स्कूल
ज्ञान सेवा इन्जिनियरिङ विभाग
EEWS को स्नातक स्कूल (ऊर्जा, पर्यावरण, पानी, र स्थिरता)
उदारवादी कला र convergence विज्ञान को कलेज
मानवता र सामाजिक विज्ञान विभाग
संस्कृति प्रौद्योगिकी को स्नातक स्कूल
व्यापार र प्रविधि व्यवस्थापन विभाग
भविष्य रणनीति को स्नातक स्कूल
विज्ञान र प्रविधि नीति स्नातक स्कूल
व्यवस्थापन को स्नातक स्कूल
वित्त को स्नातक स्कूल
सूचना को स्नातक स्कूल & मिडिया व्यवस्थापन
ग्रीन वृद्धि को स्नातक स्कूल
संस्थान मा स्थापित भएको थियो 1971 विज्ञान कोरिया विकसित संस्थान रूपमा (Kais) अमेरिकी $6लाख एक ऋण द्वारा (अमेरिकी $ 34 लाख 2014) अन्तर्राष्ट्रिय विकास लागि संयुक्त राज्य अमेरिका एजेन्सी देखि (यूएसएड) र राष्ट्रपति पार्क चुंग-Hee द्वारा समर्थित[ संस्थान गरेको शैक्षिक योजना मुख्य रूप द्वारा फ्रेडरिक ई डिजाइन भएको थियो. Terman, को उपाध्यक्ष स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, र चुंग Geum-मो, ब्रूकलिन को पलिटेक्निक संस्था मा एक प्रोफेसर. संस्थान दुई मुख्य कार्य उन्नत वैज्ञानिकहरू र ईन्जिनियरहरु तालिम र देशमा स्नातक शिक्षा एक संरचना विकास गर्न थिए. अनुसन्धानमा द्वारा थाले 1973 र undergraduates द्वारा स्नातक गरेको डिग्री लागि अध्ययन 1984.
मा 1981 सरकार विज्ञान कोरियाई विकसित संस्थान र विज्ञान र प्रविधि को कोरियाली संस्थान मर्ज (KIST) विज्ञान र प्रविधि को कोरिया विकसित संस्थान गठन गर्ने, वा KAIST. कारण फरक अनुसन्धान दर्शन गर्न, KIST र KAIST मा विभाजित 1989. त्यसै वर्ष KAIST र प्रविधि को कोरिया संस्थान मा (किरा) संयुक्त र Daedeok विज्ञान टाउन inDaejeon गर्न सियोल देखि सारियो. जुलाई मा आफ्नो उद्घाटन मा राष्ट्रपति Suh पहिलो कार्य 2006 बाहिर राख्नु गर्न KAIST विकास योजना थियो. को 'KAIST विकास पाँच-वर्षीय योजना' फरवरी मा अंतिम रूप थियो 5, 2007 KAIST संचालन समिति द्वारा. Suh सेट KAIST को लक्ष्य संसारमा सबै भन्दा राम्रो विज्ञान र प्रविधिको विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक बन्न थिए, र द्वारा शीर्ष-10 विश्वविद्यालयहरु को एक बन्न 2011. जनवरीमा 2008, विश्वविद्यालय आफ्नो पूरा नाम ड्रप, विज्ञान र प्रविधि को कोरिया विकसित संस्थान, र केवल आफ्नो आधिकारिक नाम परिवर्तन KAIST.
तिमीलाई चाहिन्छ KAIST छलफल ? कुनै पनि प्रश्न, टिप्पणी वा समीक्षा
मानचित्र मा KAIST
फोटो: KAIST आधिकारिक फेसबुक
KAIST को छलफल गर्न सामेल.
चुंग-Ang विश्वविद्यालय सियोल
Hanyang विश्वविद्यालय सियोल